Maraykanka oo difaacay weerarkii ay dadka badan ku dhinteen ee Yemen - BBC News Somali
Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday deegaanka ay Al-Qaacida ku xoog badan tahay ee dalka Yemen oo ay u badan tahay in ay shacab badan ku dhinteen in uu ahaa "mid aad looga fiirsaday".
Ugu badnaan 23 ruux oo shacab ah ayaa lagu dilay weerarka oo ka dhacay tuulada ku taala gobolka Yakla Sabtidii, waxaana ka mid ahaa 10carruur ah sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha u ol'oleysa ee Reprieve.
Wararka Yemen ka imaanayana waxay sheegayaan in dadka ay waxyeeladu gaartay ay ka mid tahay gabadh uu dhalay Anwar Ak-awlaki oo ahaa nin malayshiyada ka mid ahaa oo lagu dilay weerar uu Maraykanku qaaday 2011kii.
Weerarkan cusub ayaa ahaa kii boobaad ee noociisa ah ee uu amro madaxweyne Donald Trump.
Milatariga Maraykanka ayaa markii hore sheegay in uu ku dhintay weerarkaas William 'Ryan' Owens oo 36 jir ah oo ka mid ahaa ciidammada badda ayna saddex kale ku dhaawac meen. Laakiin taliska dhexe ayaa markii dambe sheegay in laga yaabo in dadka dhintay ay carruur ku jiraan.
Waxaa lagu soo waramay in weerarkaas ay ka qayb qaateen dhawr ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee qumaatiga u kaca. waxaana ku dhintay 14 ka mid ah malayshiyada oo ay ka mid yihiin saddex ka mid ah hogaamiyeyaasha Al-Qaacida sida ay milatariga Maraykanku sheegeen.
Afhayeenka Aqalka Cad, Sean Spicer ayaa saxafiyiinta u sheegay "way adagtahay in aad guul dhamaystiran sheegato marka ay nafi kaa dhimato ama dad kaa dhaawacmaan.
Lahaanshaha sawirka Capt Jason Salata
Image caption William 'Ryan' Owens oo 36 jir ah oo ka tirsanaa ciidammada badda ayaa isna ku geeriyooday weerarkaas
"Laakiin waxaan u malaynayaa marka la isku duuduubo waxa noo qabsoomay si aan u baajino in mustaqbalka dad nalaga laayo markaas waxaan filayaa waa hawlgal guulaystay marka dhankaste laga fiiriyo".
Marnaba ma uusan soo hadal qaadin in dad shacab ah waxyeelo ka soo gaartay.
Galinkii hore ee Khamiista ayay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Reprieve sheegtay in canug markaas uun dhashay uu ka mid ahaa 10 carruur ah oo ku dhimatay weerarkaas.
Waxaa kale oo ay soo xigatay warar deegaanka ah oo sheegaya in haweenay xaamilo ah caloosha laga toogtay oo ay dhashay ilmo dhaawac ah oo markii dambana dhintay.
Carruur kale oo dhawr ah oo dhimatay ayaa sawirradooda la soo dhigay baraha bulshada, waxyar uun ka dib marka uu weerarku dhacay.